“Ronaldo weligiis gaari maayo Messi, Real Madrid-na weligeed u ciyaari meyso sida Barcelona oo kale.”. – Gool FM
“Ronaldo weligiis gaari maayo Messi, Real Madrid-na weligeed u ciyaari meyso sida Barcelona oo kale.”.
Byare June 16, 2017
(Spain) 16 Juunyo 2017. Lionel Messi shaki la’aan waa kan ugu fiican oo waxaa lala bar bar dhigaa rugcadaayadii hore sida Pele, Cruyff iyo Di Stefano laakiin Cristiano Ronaldo waxaa lala bar-bardhigaa Lionel Messi sidaa waxaa qaba Hristo Stoichkov.
Ronaldo ayaa iminka xafidanaya abaal marinta Ballon d’Or wuxuuna ugu cad cad yahay iminka inuu ku guuleysto tii 5-aad isla markaana iska bar bareeyo Messi.
Laakiin Stoichkov ayaa aaminsan in xiddiga reer Argentina uu leeyahay libinta sare marka ay timaado tilmaamta rugcadaa dhab ah, iyadoo tayadiisa lala bar bardhigo dadkii hore balse Ronaldo lala bar bardhigo uun Messi.
“Messi shaki la’aan waa Number One, wuxuu had iyo jeer u ciyaara kooxda, farsamo waali ah, waa cabqari welina anaani ma ahan, waa muhiim midaa,” Weeraryahankii hore ee Barca Stoichkov ayaa sidaa u sheegay Sport Express.
“Dadku waxay Messi la bar bardhigaan Di Stefano, Pele, Cruyff. Laakiin Ronaldo waxaa lala babac dhigaa Messi taasina wax badan ayay leedahay.
“Ronaldo weligii lama mid noqon doono Messi, Real Madrid-na weligeed uma ciyaari doonto sida Barcelona oo kale.”.
Lionel Messi ayaa dhaliyay 54 gool 52 kulan uu ciyaaray kal ciyaareedka 2016-17 taa oo keentay inuu ku guuleysto kobaha dahabka markii afaraad.
Cristiano Ronaldo ayaa isna dhaliyay 42-gool laakiin wuxuu Real Madrid ka caawiyay La Liga iyo Champions League isagoo sidoo kale goolashiisa CL ay kor u dhaafeen 100 gool.
Bayern Munich oo dib ugu soo laabatay xiisaha Marco Verratti
Kulan ay Milan la lahayd wakiilka goolwale Neto oo daqiiqado kahor soo dhamaaday! (Milan oo qabtayaal raadinaysa)